भर्खर उम्रेका दुध का मुन्टा - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » भर्खर उम्रेका दुध का मुन्टा
भर्खर उम्रेका दुध का मुन्टा
उनि सँग अन्लाईन भेट भाको पनि धेरै भएको थिएन । उन्ले मेरो कथा हरु पढेकी रहिछिन । त्यसैले उनि म सङ्ग डाईरेक्ट नै छाडा कुरा गर्थिन । उनि १० कक्षा मा पढ्ने भए पनि शारिरिक अनि मानसिक रुपले यौन को मामला मा एग्रेसिब नै थिईन । बिचरा यो ईन्ट्र्नेटको प्रबिधी ले सबै को पहुच मा अनि पकेट मा नै ब्लु फिल्म को सुबिधा त ल्याईदियो तर यौन चाहाना पुरा गर्न भने हाम्रो समाज मा भने आहिले पनि बाउ बाजेको पाला मा भन्दा पनि गार्हो छ
यौन कथा हरुले तताएको बेलामा उनि छट्पटाएर मेरो मेसेर्न्जर मा सेक्स च्याट गर्न आउथिन । म सकेसम्म उनिलाई सन्तुस्ट पार्थे । कहिले अत्याधिक छाडा कुरा अनि कहिले भिडियो मा नाङै बसेर यौन अङगा हल्लाई हल्लाई उन्को तिर्खा मेट्दथे । म पनि उन्को त्यो भर्खर भुत्ल्ला उम्रन थलेका पुती मा उन्ले औंला हालेर पानी फालेको अनि सधै भरी म्वाई खादै खेलाई रहु जस्तो गोला गोला एक हातमा अलिक नअटने दुध अनि भर्खर उम्रेका दुध का मुन्टा देखेर पागल भाई च्याट मा रम्दथे ।
समय बित्दै गयो , उन्को चाहाना ले उन्लाई नै पागल बनाउन थल्यो । । उनि अब च्याट बाट धेरै मजा आउन छोडेको कुरा गर्न थालिन । मैले मौका मा चौका हाने अरथात मैले उन्लाई भेट्ने प्रस्ताब राखे । उन्लाई पनि आज्कल खपी नसक्नु भएको ले तुरुन्तै उन्लेहुन्छ भनिन । उन्ले आफ्नो मिल्ने समय बताईन भने मैले उन्लाई जान र बस्न मिल्ने अनि कसैले थाहा नपाउने ठाउ तिरा को एक लज मा दिन्मै बस्ने कुरा गरे उनि पनि राजी भैन । उनि साएद स्कुल को २-३ पिरिएड छोडेर उन्को आफन्त अनि रिलेटिभ कोही नभेट्ने अनि नभाको ठाउको लज को आसपास आउने भैन । म टाईम भन्दा धेरै पहिले नै त्यहाँ पुगेको थिय । सबै कुराको फाईनल भए पछी मैले मेरो फोन नम्बर दिएको थिए । अब उन्को निर्णय अनुसार नै कल उन्ले नै गरिन । हाम्रो २ मिनेट मा नै भेट भो । आह उनि अन्लाईन भिडियो च्याट मा भन्दा पनि धेरै सेक्सी रहिछिन । भेट्ने बित्तिकै उनि नै पहिला बोलिन । । हामी फटा फट लज मा प्रबेस गरी रुम को चाबी लिई रुम तर्फा लाग्योउ ।अब रुम को भित्र बाट लक गर्न पनि समय धेरै लागेन । मैले अब उन्लाई च्याप्प समातेर जुरुक्क उचाले । उनि पनि सेक्स को चाहाना ले खुब तातेकी रहिछिन । उनि पनि मेरो अङालो मा भाधिइन । त्यसपछी त त्यो आगो को अगाडी घ्यु किन पग्लदैन थियो र ।
मैले बिस्तारै उनको मुखमा मेरो मुख लगे अनि बिस्तारै मुखमा किस गर्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै मेरो जिब्रो ले उसको जिब्रो खेलाउन थाले । मेरा हातहरु सुस्तरी सुस्तरी उनको दुधको पोका तिर सार्न थाले । बिस्तारै उनलाई किस गर्दै टी-शर्ट बाहिरबाट नै उनको कसिलो दुधको पोकाहरू माड्न थाले । उनी “स्वाऽऽऽऽऽऽऽ , स्वाऽऽऽऽऽऽऽ गर्दै लामो लामो सास फेर्न थाली । मेरो लाँडो ठन्केर कट्टुनै च्यातेर बाहिर निस्केला झै भाको थियो । बिस्तारै उनको टी-शर्ट भित्रै हात लगेर उनको दुध माड्न थाले । उनलाई किस गर्दै मैले दुबै हात उसको ढाँड तिर लगेर ब्राको हुक खोलिदिए र दुबै हातले उसको दुबै दुधको पोकाहरू माड्न थाले । “ऐयाऽऽऽऽ , दुख्यो , अलि बिस्तारै गर्नु न ” उनले रुञ्चे स्वरमा भनी । “सरी सरी , म त जोशमा आएर बेस्सरी गरेछु , ल ल अब बिस्तारै गर्छु” भने अनि दुधको पोकाहरू बिस्तारै बिस्तारै माड्न थाले । अब उनी पनि मलाई किस गर्दै थिई , उनीलाई पनि अब जोश चढे जस्तो थियो । करीब १० मिनेट जति किस गर्ने र दुध माड्ने काम भइ पछि मैले उनलाई सोफामा बसाए । उनी कुनै अप्ठयारो नमानी बसी रही । अनि मैले उनको शर्ट र ब्रा खोले , उनको कसिलो दुधको पोका देखेर म मा एक प्रकारको तरंग पैदा भयो । अनि म उसको अगाडी बसे अनि उनको दुधको मुण्टो जिब्रोले खेलाउन थाले । उनी आँख चिम्म गरेर लामो लामो सास फेर्दै थिई “स्वाऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, स्वाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, स्वाऽऽऽऽऽऽऽऽऽ” अब म मा सहन सक्ने स्थिती थिएन , कति बेला उसको पूतीको दर्शन गरौ , मेरो लाँडो छिराएर मजाले चिकौ भई सकेको थियो । मैले बिस्तारै उनलाई सोफामा नै सुताए । उनको पेन्ट खोलिदिए । उनले केही भनिनन , शायद उनलाई पनि मजा आई रहेको थियो र चिक्नलाई आतुर भई सकेको थियो । उनले गुलाबी रङको पेन्टी लगाएकी रहिछ । पेन्टीको तल भाग भिजेको थियो , शायद मैले उसको दुधको पोका माडेको ले उसको पुतीबाट पानी झरेको हुनु पर्छ । मैले पेन्टी बाहिरबाटै उनको पुती खेलाउन थाले । उनी त झन ईमोशनमा आईछ क्यार , “आहहहहहह, ओहहहहह , उफफफफफफ” भन्दै कराउन थाली । मलाई उनको त्यो आवाजले झन उर्जा प्रदान गर्यो । मैले उनको कट्टु पनि खोलेर फ्याकिदिए , अब उनी मेरो अगाडी नांगै थिई । मैले पनि हतार हतार आफ्नो सबै लुगा खोले अनि उनको पुती खेलाउन थाले । देब्रे हातले उनको पुतीको टीसी खेलाउन थाले अनि दाहिले हातले उनको दुधको पोकाहरू माड्न थाले । करीब १० मिनेट पछि उनको पुतीबाट पानी झर्न थाल्यो । मेरो हात पुरै च्याप-च्याप भयो । उनी सुस्केरा हाल्दै आफ्नो चाक हल्लाउन थाली । शायद उनलाई पनि खपी नसक्नु भई सकेको थियो , त्यसैले अब उनी आँख चिम्म गरेरै मलाई अंगालोमा बाँधेर किस गर्न थाली । मैले उसको दाहिने हात समाएर मेरो लाँडोमा राखि दिए । उनी अब मेरो लाँडो खेलाउन थाली । । लाँडोलाई च्याप्प समाएर उनी भित्र-बाहिर गर्न थाली । मैले केही नभनी उको पुती खेलाउन थाले र सँग सँगै दुध पनि माडदै थिए ।
यस्तै 10 मिनेट जति पछि मैले उनको खुट्टा फटाएर अब चिक्ने अवस्थामा मिलाए । बिस्तारै मेरो लाँडो उसको पुतीको मुखमा लगे अनि बिस्तारै छिराउन खोजे । शायद उनको पुती भरी पानी भएकोले गर्दा होला , कुनै गाह्रो नभई मेरो लाँडो उसको पुतीमा स्वात्तै भित्र छिर्यो । “आहहहहहहहह” उनी कराई । अब म बिस्तारै बिस्तारै उनलाई चिक्न थाले । म जति उनलाई ठेल्थे , उनी त्यती नै तल बाट कण्डो हल्लाउँदै मलाई पनि ठेल्थी , यस्तो लाग्थ्यो उनी चिक्न र चिकाउन को लागी ज्यानै फाल्छे जस्तो , म उनलाई कस्सी कस्सी चिक्न थाले । उनी पनि मलाई तलबाट माथी उफ्रिदै साथ दिदै थिई । १० मिनेट जति यो अवस्थामा चिके पछि मैले मेरो लाँडो उसको पुतीबाट निकाले र उनलाई सोफाबाट उठाए । “तिमीलाई कस्तो लागि रहेछ उन ?” मैले अन्जान भएर सोँधे । “मलाई त अचम्म लागि रहेको छ, हामी कसरी यस्तो गर्न थाल्यौ है , मलाई त सपना जस्तो लागि रहेको छ । तपाई को ? म को ? तर हामी आज आफ्नै जस्तै सेक्स गर्दैछु , उनले लजाउँदै भनी । “छोडदेउ यो कुरा , खै सोफामा हात राखेर घोप्टो परेर बस” मैले उनलाई सोफा तिर ढकेल्दै भने । उनी पनि मैले भने जस्तै गरेर बसी , उनी खुट्टा फट्याएर घोप्टो परेर चिक्न सजिलो हुने गरी बसी । मलाई खासै गाह्रो भएन र मैल उनलाई कुकुर ले चिकेको स्टाईलले चिक्ने बिचार गरे । बिस्तारै मेरो लाँडो उनको पुतीमा छिराए ।
“ऐय्याऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ दुख्यो , बिस्तारै गर्नु न , यसरी गर्दा त दुख्छ” उनले कराउँदै भनी । अनि मैले बिस्तारै उनको पुतीमा लाँडो छिराए र बिस्तारै बिस्तारै धक्का दिन थाले । उनी “आहहहहहहह ओहहहहहहह उफफफफफफफ” गर्दै कराउन थाली । उनका ती सुस्केराहरूले मेरो जोश बढ्न थाल्यो र बिस्तारै बिस्तारै चिकाईको स्पीड बढाउन थाले । अब भने म फुल स्पीडमा उनलाई चिक्न थाले । “कचक कचक कुचुक कुचक ठ्याप ठ्याप” यस्ता आवाजहरू सो कोठामा गुञ्जीरहेको थियो । म बल गरी गरी उनलाई पछाडिबाट चिक्दै थिए , उनी पनि कण्डो हल्लाउँदै मलाई साथ दिदै थिई । उनी निकै जोशमा कराउँदै थिई “अझै कस्सेर , अझै कस्सेर ……….. अलि छिटो…….. अलि छिटो………” म पनि भएभरको बल लगाउँदै उनको कम्मर समाउँदै चिक्न थाले । करीब ७-८ मिनेट जती चिके पछि उनलाई मतिर फर्काएर फेरी किस गर्न थाले । एक हातले फेरि उसको पुती खेलाउन थाले । २-३ मिनेट पछि मैले उनलाई भुईमा कोल्टे पारेर सुताए अनि म उनको पछाडी पटी कोल्टे परेर सुते । उनको एउटा खुट्टा माथि तिर उचाले अनि बिस्तारै उनको पुतीमा मेरो लाँडो छिराए । यसरी चिक्दा मेरो पुरै लाँडो उनको पुती भित्र त छिरेन तर पनि चिक्न मजा नै आउने रैछ । बिस्तारै बिस्तारै पछाडी बाट उनलाई चिक्न थाले । यसरी धेरै बेर चिक्न सकिन , थाकिदो रैछ र पुनः उठेर उनलाई उतानो बनाए अनि उनको दुबै खुट्टा मेरो काँध माथी राखे र फेरि उनलाई चिक्न थाले । यसरी चिक्दा चै पुरै लाँडो उनको पुती भित्र छिर्यो । म बल गरी गरी उनलाई यसरीनै चिक्न थाले , उनी फेरी “आहहहहहहह ओहहहहहह उफफफफफफ, अझै अझै …….. छिटो छिटो……..” भन्दै कराउन थाली । यसरी लगातार ५ मिनेट जति चिके पछि , मैले मेरो लाडोबाट निस्केको माललाई सम्हाल्नै सकिन र उनको पुती भित्र सबै माल झारिदिए । , उनी मुनिबाट कण्डो हल्लाउँदै “गर्नु न प्लिज……….” भन्दै कराउँदै थिई । मेरो पनि लाडो अझ धेरै नै ठ्न्की रहेको हुनाले म पनि अरु मच्ची रहे । २-३ मिनेट को चिकाई पछी मेरो फेरी दोश्रो पिच्कारी छुट्यो । कन्डम लगाएको हुनाले मैले लाडो भित्र नै राखिरहेको थिय । उनी पनि स्वाँऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ स्वाँऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ गर्दै लामो लामो सास फेर्दै थिई ।3मिनेट जति हामी त्यै अवस्थामा पल्टि रह्यौ । “कस्तो लाग्यो ?” मैले सोँधे । “कस्तो भयो ?, मजा भयो । धेरै हल्का महसुस भयो । सितल भयो भन्दै मलाई हटाईन । मैले बिस्तारै लाडो को फेद मा समातेर कन्डम झिकेर उन्लाई फुसी ले टुप्पो फुलेको कन्डम दिय केहि बेर खेलएर उनिले खाट मुनी फाल्दै मुस्कुराईन । मेरो चाहाना अरु १ पटक गर्ने भए पनि उन्को समय नभएको कारण ले त्यो दिन हामिले १ पटक मात्र चिक्योउ । हाम्रो सम्बन्ध खाली चिकाई मा मात्र सिमित गर्ने बाचा गराउदै उनि आफ्नो घर तिर लागिन । त्यो दिन देखी कहिले काही उन्लाई खप्न गर्हो भएको दिन उन्ले बोलाउछिन अनि म उन्लाई बेग्लई किसिम्ले चिक्छु । उन्लाई प्राय १ पटक चिके पछी मेरो बिचार मा २-३ हप्ता सम्म सान्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले होला उन्ले मलाई प्राय १ महिना मा १ पटक चिक्न बोलाउछिन अहिले सम्म .
chikna ta kaam garne keti lai po maja aauchha ta, dhakka diye, first time sex, first time sex gareko, gharbeti lai chikna diye mero puti, hot and sexy story nepali, katha, lado chuseko katha, lado ta futla jasto hudo raixa, maile ni afulai control ma rakhna sakina, majja ko doodh, Malai Chikna Aati Maan Parcha, meri girlfriend sanga chikeko katha, mero lado sajiali chiryo, mero lado ta uthihalyo, miss ko puti, Miss lai chhikeko katha, nepali chikeko katha, nepali doodh, nepali dudh, nepali hot, nepali sex story, timro dudh, भर्खर उम्रेका दुध का मुन्टा
bhauju mero lamo lado hereko herai bhain
sunita bhauju chikeko